သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): August 2009
လည်ပင်းမှာ နင်နေသလိုလို တဲ့။
ဘယ်လို.. ဘယ်လို.. ဘယ်လို
ဟန်မပို မာန်ချိုချို မေးမိပြန်တော့
ကဲ.. ကဲ.. ကဲ
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 22:543comments:
ချစ်သူရဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ စကားက
စက္ကန့် မိနစ် နာရီ
ရက် လ နှစ် စန်းလဂ်အယှဉ်လုပ်တဲ့
တကူးတက ပြန်မွေးပေးပါလား အမေ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 11:20 11 comments:
နှင်းဆီ သဇင် သစ်ခွ
ဒေါန မြလေး ကြာပဒုမ္မာ
ခတ္တာ ခွါညို စံပယ် ကြက်ရုံး
ပိတောက်တစ်ခက်ဆို လုံလောက်ပြီ။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 23:397comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 13:449comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:286comments:
မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ ညီ အစ်ကို မောင်နှမများကို အထူးဘဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (အသက်ဘယ်လောက်လဲလို့တော့ မမေးနဲ့နော်။ ပြောဘူး :D။ ကျနော်က အင်္ဂါသားပါ)။
ရေနစ်နေတဲ့သူအတွက် မြစ်ပင်တစ်ပင်ဟာ ခိုကိုးရာပါ။
အားအင်တွေလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပုန်းရည်တစ်ခွက်ဟာ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ သြဇာအာဟာရလေးပါ။
စိတ်ဓါတ်တွေကျနေတဲ့အချိန်မှာ အားပေးစကားလေးတစ်ခွန်းဟာ စိတ်အာဟာရဆေးတစ်ခွက်ပါ။
အထီးကျန်နေတဲ့အချိန်မှာ စကားတစ်လုံးပြောပေးခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးနှစ်သိမ့်မှုလေးပါ။
ကျနော့်မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြခြင်းဟာ ကျနော့်အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ရတနာတစ်ပါးပါဘဲဗျာ။ ။
ကျန်းမာပါစေ။ ချမ်းသာပါစေ။ လိုအင်တွေပြည့်ပါစေ။
ထီဆု အကြီးဆုံးပေါက်ကြပါစေ။ လူတိုင်းရဲ့  ချစ်ခင်မှုကို ကြပါစေ။
နှစ်သက်သူနှင့်သာ ပေါင်းဖော်နိုင်ကြပါစေ။ ရုပ်အဆင်းလှပကြပါစေ။
ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအဆစ် ပြေပြစ်ကြပါစေ။ ခွန်အား ဥာဏ်အားနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။
ဘေးဘယာတွေ ဝေးကွာကြပါစေ။ မေတ္တာပန်းများ ပွင့်လန်းနိုင်ကြပါစေ။
[လိုချင်တဲ့ဆု (ကောင်းတဲ့ဆု)တောင်းပြီး ပြည့်ကြပါစေ]။
သူတို့က ကျနော့်အတွက် ဒီလိုလေးတွေ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။
10 August 2009 08:33
တ၀ိုင်းတော့စီစဉ်သင့်တယ်နော် ဟဲဟဲ နောက်တာပါဗျာ
ဘ၀မှာကောင်းသောမြတ်သော နေ့များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိင်
10 August 2009 08:35
10 August 2009 09:13
10 August 2009 09:50
မောင်လေးရေ မွေးနေ့ မှာ ဆန္ဒတွေအားလုံးပြည့်မြောက်
ပါစေနော်။ နောင်မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကိုလည်း အဆင်
ပြေပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ စာမေးပွဲများစွာကို အခက်အခဲမရှိဖြေဆိုနိုင်ပါစေ။
ဘ၀ဆိုတဲ့ အချိန်ကို စတင်ခဲ့တဲ့ နေ့..အမှတ်တရ
ငါဆိုတဲ့ ငါ တစ်စစပြောင်းလဲခြင်း သတိထားမိအောင် စပေးခဲ့တဲ့နေ့..အမှတ်တရ
ဒီအကောင်းဆုံးနေ့လေးကို အစပြုခွင့်ပေးခဲ့သူတွေ ကိုလည်း...ဂါရ၀ဲပြုတတ်အောင် ဖန်တီးပေးတဲ့နေ့...
သူငယ်ချင်း ဒီနေ့က အမှတ်တရ...တကယ်ကို အကောင်းဆုံးနေ့လေးပဲ..နောက်နေ့တွေမှာလည်း ဒီနေ့ ကအကောင်းဆုံးနေ့လေးပဲလို့ တွေးမြင်နိုင်ပါစေ
10 August 2009 15:19
10 August 2009 15:50
သြော်.... 10 ရက်နေ့ လား.. နောင့် က 14 ရက်နေ့.. ပျော်ရွင်ပါစေနော်.... လိုအပ်ချက်တွေ မှန်သမျှပြည့်စုံနိုင်ပါစေ..ရှင်..။
ကိုမောင်ရေ အတိအကျ မသိဘဲနဲ့ မွေးနေ့ကဗျာလေးကြောင့် လာပြီး သူများတွေပြောလို့ ရင်ထဲကနေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ယနေ့မွေးနေ့မှသည် လွပ်လပ်မှုများနဲ့အတူ လိုအင်ဆန္ဒများနဲ့ ပြည့်ဝပါစေလို့...
10 August 2009 19:07
Happy Birthday ပါ သယ်ရင်း ကိုကိုမောင်
ဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံး ဖြစ်ပါစေရှင် နောက်ကျသွားတာ Sorry :P
မွေးနေ့လေးမှ စပြီး ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ပါစေဗျာ..
11 August 2009 01:13
ခုမှသိတယ်.... Happy Birthday နော်..အကို...
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ... ကိုကိုမောင်...ကစားကွင်းသွားလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်...
နှစ်ရက်တောင် နောက်ကျသွားတယ် ... အွန်လိုင်းမလာတာကြာသွားလို့ ပါ ....
မွေးနေ့အလွန်နှစ်ရက်ကျော်ကစပြီး ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ ထပ်တူကျနိုင်သောသူဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် ....
စီဘောက်စ်ထဲမှာလဲ ဒီလို ဆုတောင်းပေးကြသေးတယ်။
12 Aug 09, 16:16
kiki: မွေးနေ့ လွန်မှ သိရတယ်.စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် . ... ပျော်ရွှင်ပါစေ .. ( နောင်နှစ်အတွက် ကြို ဆုတောင်းပေးသွားပါသည်)
12 Aug 09, 01:08
11 Aug 09, 03:00
လွင်ကို:ံMay ur wishes be filled in every moment of ur life
10 Aug 09, 18:17
မ အနမ်း: မွေးနေ့ အမှီလာတာ။ ကွန်နက်မရလို့နောက်ကျတယ်မောင်လေးရေ ။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေနော်
10 Aug 09, 17:51
နှင်းနဲ့မာယာ: Happy Happy Birthday to you!!!!!
Japuma,Pici,Juzz: Happy Birthday to you...All your dreams may come true in your Happy Birthday.
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:425comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 14:32 17 comments:
2 -2(1-4)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:322comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 19:205comments:
ရက်ဖရင့်စ် များများရစေဖို့ အလုပ်လုပ်
စာအုပ်တွေ ဆင့်ကာ(ဆင့်ကာ) သယ်လာရ
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:475comments: